डा. केसीका माग लत्याउँदै संसद अघि बढ्दै – SidhaRekha
डा. केसीका माग लत्याउँदै संसद अघि बढ्दै
२०७४ श्रावण २६, बिहीबार १७:४५ August 10, 2017
काठमाडौं, २६ साउन । चिकित्सा शिक्षाकाे बेथितिविरूद्ध डा. गाेविन्द केसी अनसन बसेकाे अाज १९ दिन भइसक्दा पनि सरकारले उनका माग सम्बाेधन गर्न तत्परता देखाएकाे छैन । बरू डा. केसीले विराेध गर्दागर्दै संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको कार्यदलले मनमोहन, बीएन्डसी मेडिकल लगायतका कलेजलाई सम्वन्धन दिन सकिनेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेको छ ।
अाजै समितिको पूर्ण बैठक बसेर विधेयक संसदमा पेश हुने कार्यदलका एक सदस्यले जनाएका छन् । उनका अनुसार कार्यदलले सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेको छ । जसअनुसार आशयपत्र प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायले तोकेको पूर्वाधार भएको र निरीक्षण अनुगमन भइसकेका मेडकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी भइरहेकाे छ ।
पटकपटक अनसन बस्दै अाएका डा. केसीले आशयपत्र नविकरण नगर्ने व्यवस्था गर्न र उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलार्इ सम्बन्धन नदिन माग गरेर पुनः अनसन बसेका छन् । तर, संसदीय समितिमा सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने सांसदहरु बढी भएपछि डा. भगवान् कोइराला लगायतले आशयपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजका हकमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेका पूर्वाधार भए सम्बन्धन दिन सकिने मध्यमार्गी बाटो सुझाएका थिए ।
कार्यदलले भने सम्बन्धित निकायले तोकेको पूर्वाधार भएकालाई सम्बन्धन दिन सकिने भनेको छ । यो संशोधन हुबहु पास भएमा मनमोहन मात्र होइन, उपत्यकामै ५ र झापामा एक मेडिकल कलेज खुल्नेछ । खुल्न लागेर बीचमा राेकिएका अधिकांश मेडिकल कलेजमा सांसदहरू र नेताहरूकै लगानी रहेकाे भन्दै विगतदेखि अलाेचना हुँदै अाएकाे छ । यही कारण पनि डा. केसीका जनपक्षीय जायज माग हुँदाहुँदै पनि सांसद, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारले समेत उनका मागप्रति गम्भीरता दर्शाएका छैनन् । यो विधेयक लागू भएपछि उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएकाे दफा १२ भने कायमै राखिएको छ ।
मुख्य समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य
अघिल्लोअाजीवन जेल बस्नुपर्ने ६ अपराध
पछिल्लोमाओवादी सकियो, केन्द्रमात्रै बाँकी : ओली